DANIEL NA MIRIAM lụrụ n’ọnwa itoolu n’afọ 2000, biri n’obodo Baselona dị na Spen. Daniel kwuru, sị: “Anyị biri ndụ ndị oké ozu. Ọrụ anyị mere ka anyị na-aga eri nri n’ebe a na-ere ezigbo nri, na-aga mba ọzọ, na-eyikwa uwe ndị oké ozu. Anyị na-agachikwa ozi ọma anya.” Ma, ha mechara gbanwee otú ha si ebi ndụ.
Ná mgbakọ distrikti nke afọ 2006, e kwuru okwu ruru Daniel n’obi. Onye kwuru okwu ahụ jụrụ, sị: “Ànyị na-eme ike anyị niile iji nyere ‘ndị na-adagharị na-aga n’ebe a ga-egbu ha’ aka ịbanye n’ụzọ ahụ na-eduba ná ndụ ebighị ebi?” (Ilu 24:11) Ọ kọwara na ọrụ anyị bụ izi ndị mmadụ ozi ọma ga-eme ka ha dị ndụ. (Ọrụ 20:26, 27) Daniel kwuru, sị, “Ọ dị m ka ọ̀ bụ mụnwa ka Jehova na-agwa okwu.” E kwukwara na mmadụ ga na-enwekwu obi ụtọ ma o jekwuoro Jehova ozi. Daniel ma na ọ bụ eziokwu n’ihi na nwunye ya bụ́ ọsụ ụzọ na-enwe ezigbo obi ụtọ.
Daniel sịrị: “M kpebiri na oge eruola ka m gbanwee ọtụtụ ihe m na-eme.” O mere otú ahụ. O belatara oge o ji na-arụ ọrụ, malite ịsụ ụzọ, na-echekwa ụdị obi ụtọ ya na nwunye ya ga na-enwe ma ha jewe ozi n’ebe e nwere mkpa ka ukwuu.
IHE BU ỤZỌ SIERE HA IKE, HA ENWETAZIE OZI MERE HA OBI ỤTỌ
N’ọnwa ise n’afọ 2007, Daniel na Miriam gbara arụkwaghịm, kwaga Panama, bụ́ obodo ha gatụrụla. Ebe ha na-ekwusazi ozi ọma bụ n’agwaetiti ndị dị na Bokas del Toro, n’Oké Osimiri Karịbian. Ọtụtụ ndị bi n’ebe ahụ na-asụ asụsụ Guami. Daniel na Miriam bu n’obi na ego ha dewere ga-ezuru ha ịnọ ihe dị ka ọnwa asatọ na Panama.
Ha na-eji ụgbọ mmiri esi n’otu agwaetiti gaa n’ọzọ. Ha ruo, ha agbara ígwè na-aga ozi ọma. Ha ka na-echeta ụbọchị mbụ ha gbara ígwè ihe dị ka kilomita iri atọ na abụọ gafee obere ugwu dị iche iche, anwụ ana-achakwa ha. Ọ fọrọ obere ka Daniel tụbọọ n’ihi ike ọgwụgwụ. Ma, ndị Guami ha hụrụ nabatara ha nke ọma n’ụlọ ha, karịchaa, mgbe ha mụtara ụfọdụ okwu n’asụsụ Guami. Ọ dịghị anya, ha amalite ịmụrụ mmadụ iri abụọ na atọ ihe.
Mgbe ego ha dewere gwụrụ, obi jọwaziri ha njọ. Daniel kwuru, sị: “Anya mmiri juru anyị n’anya, anyị echewezie otú anyị ga-esi laghachi Spen. Obi adịghị anyị mma na anyị ga-ahapụ ndị anyị na-amụrụ ihe.” Ma mgbe otu ọnwa gachara, ha nwetara ozi mere ha obi ụtọ. Miriam sịrị: “A gwara anyị ka anyị bụrụ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche. Obi tọgburu anyị atọgbu na anyị agaghị ahapụ ebe anyị na-eje ozi.”
IHE KACHA MEE HA OBI ỤTỌ
N’ihi ihe ụfọdụ a gbanwere ná nzukọ Jehova n’afọ 2015, a gwara Daniel na Miriam ka ha bụrụ ndị ọsụ ụzọ oge niile. Gịnị ka ha ga-eme? Ha tụkwasịrị obi n’ihe e kwuru n’Abụ Ọma 37:5. Ebe ahụ sịrị: “Nyefee ụzọ gị n’aka Jehova, dabere n’ebe ọ nọ, ya onwe ya ga-emekwa ihe.” Ha chọtara ọrụ ha ga-eji na-egbo mkpa ha ma ka na-asụ ụzọ. Taa, ha na-eje ozi n’ọgbakọ dị na Veraguas, dị na Panama.
Daniel kwuru, sị: “Tupu anyị ahapụ Spen, anyị amaghị ma ànyị ga-ahapụli ibi ndụ okomoko. Taa, anyị anaghị ebi ndụ okomoko. E nweghịkwa ihe dị mkpa kọrọ anyị.” Olee ihe kacha na-eme ha obi ụtọ? Ha sịrị: “Otú inyere ndị dị umeala n’obi aka ịmụta banyere Jehova si eme anyị obi ụtọ enweghị atụ.”